QAYLO DHAADAN KASOO YEEREESA BADWEYNTA – Warsame Digital Media WDM. "GET USED TO FREE PRESS"
Waxaa jira qeylo ka soo baxaysa biyaha Badweynta Badweynta Hindiya iyo Badda Cas ee xeebaha Soomaaliya ee Garacad, Obbia, Merka iyo Kismaayo, Berbera, Lasqorey, Boosaaso iyo Alula – oo qaylodhaan iyo xanaaqba labadoodaba laga bilaabo kalluumeysiga sharci-darada ah. Qaylo caawin doon ah iyo la joojinta kalluumeysiga sharci-darrada ah iyo qashinka sunta, burburinta deegaanka iyo deegaannada kalluunka (hoyga kalluunka), doonyaha kalluumeysiga iyo shabakadaha kalluumaystayaasha deegaanka.
Iyadoo kumanaan shisheeye oo kalluumeysana iyo hooyooyinka maraakiibta hoganaya xeebaha soomaaliyeed ee kor ku xusan, ayaa waxa iftiimiya muraayadaha nalka ee maraakiibtaas oo u eg magaalooyin waaweyn ee qarniga 21aad habeenkii.
Inta badan waxay ku hawlan yihiin kalluumeysi qoto-dheer, burburinta jawiga kalluunka, carqaladaynaaya taranta kalluunka, ukumaha burburiya malaayiin dhan, kuna reeba qashinka qub balaaarran. Kalluumaystayaasha maxalliga ahi waa baabasanyiin iyagoo maalin walba arka burburinta doonyahannadooda iyo shabakadaha ay u isticmaalaan nolool maalmoodkooda. Waxay sidoo kale ka xumaadeen oo ay ku hanjabeen in ay ogaadaan kalluunka sumoobay iyo sunta lagu qubo xeebaha iyo sidoo kale weelasha waxyaaba shaki leh ee Badda kasoo caarya. Dad badan oo ka mid ah dadka degaanka xeebta ku nool ayaa ka cabanaya cuduro qariib ah, cudurrada maqaarka, dhalmada hor-dhalad ka ah.
Kalluumeysiga sharci-darrada ah iyo daadinta sunta ah ayaa loo yaqaanaa sababaha asaasiga ah ee burcad-badeednimada ka jirta xeebta Soomaaliya. Bada burcad-badeednimada ayaa loo badalay abaabulay fal-dambiyeed lala xiriirinayo ganacsiga caalamiga ah.
Sanadihii la soo dhaafay, maamullada kala duwan ee Soomaaliya iyo kuwa dagaalka ayaa u soo saaray shatiyo kalluumeysi ah maraakiibta shisheeye iyo shirkadaha ku jira nidaamka musuqmaasuqa ee iibinta. Dowladda Federaalku waxay hadda bilowday inay gasho cayaarta iyadoo galaya qandaraasyo kalluumeysi oo shisheeye ah; bixinta liisamada aysan awood u lahayn in ay fuliyaan ama khibrad u lahayn si looga hortago isticmaalka qalabka kalluumeysiga ee la mamnuucay.
Maanta, Garoowe, magaalada caasimadda ah ee Puntland, waxaa martigelisay shirwaynaha wasiirada kalluumeysiga ah ee Soomaaliya, Federaalka iyo Dowlad-goboleedka, oo aan u maleynayo in ay ka wada-hadlaan khayraadka kalluumeysiga, mana ka wada hadlayaan waligood ilaalinaynin deegaanka.
Tani waa quruun baylah ah oo ay ku hardamayaan dhammaan tuugada dhaqaalaha iyo ganacsiga adduunka. Waxaa jira qaylo kasoo yeereesa badweynta Soomaaliyeed.
Previous OLD WAYS ARE HARD TO BREAK
Next PUNTLAND DHAQAN LA BADELLO KU ADAKAA